Ama-Indicator Trading Trading -Day Trade eminis ES500 | I-NQ100 - I-NinjaTrader 8 Uma unesidingo sokuhweba usebenzisa i-CycleTrader, kunzima ukwenza imali.
I-CT Trading Systems
Bhalisa / Demo
Ama-Indicator Custom Trading Indicator
Ama-CycleTrader Custom Auto Trading Systems - Amasu
Sigijima ku-NinjaTrader 7 & 8
Landa i-CycleTRADER Demo
Amazwana wekhasimende - Izinkomba - Juni 25th
Umsebenzi omkhulu Jerome !!! Lesi sikhangiso esisha se-CT09 Bare Delta Profile sinikeza umngcele onzulu wokungena nokuphuma emakethe. Sebenzisa amashadi akho wesikhathi eside ukuze uhlele ukuhweba kahle. Kunemiphumela enenzuzo uma uthemba izibalo !!! Lokhu okusha kusinikeza inhlawulo ebalulekile. Ngesikhathi sixoxa izolo, ngithi i-$ 7,400 ngesonto eledlule ngezinkomba ze-CT ezindala kanye ne-$ 312 ukuhweba ebusuku ebusuku nezinkomba ezintsha ngemva kokuzilayisha ndawonye, ​​no-$ 2,500 namhlanje. Thanda i-CT09 ... Nansi ubufakazi. NGIYABONGA!!
Amazwana wekhasimende - Izinkomba - Juni 26th
Ngishiswe izikhathi ezimbalwa ngaphambi nangesikhathi ngithintana noJerome mayelana nezinkomba zakhe, ngambuza ukuthi kungani lezi zingcono kuphi. Impendulo yakhe yayizama i-demo bese ibona kuqala. Ngenza lokhu futhi namhlanje ngithenga. Ngakwazi ukubona iphuzu lamanani ukungena kangcono kunanini ngaphambili. Isibonakaliso esifanayo se-CT 09 sangibuye sinikeze ukuphuma okuhle kakhulu. Siyabonga Jerome ngokudala lezi. Lishintsha indlela engihweba ngayo futhi ngenza imali manje. Ngaphezulu kwe-$ 1450 namhlanje ku-1 kuya ku-4 inkatho ku-ES 500.
Ama-Indicator Trading Trading Indicators NT8
Amashadi we-CycleTrader Smooth NT8
Izinhlelo zezokuThutha ze-AutoTrader NT8
I-CycleTrader Systems P / L Umphathi we-NT8
Izinkomba ze-CycleTrader / System NT7
Usuku lwe-14 Trial
I-San Fransisco Effect
Amazwana wekhasimende - Izinkomba
Wow, Izifundo Ezinkulu !!! Ngiyibona manje, uqinisile! Ungangena ngamanani angcono kakhulu futhi uzizwe unethemba ngokuhweba ngalunye. Siyabonga ngokungibonisa lokhu ... up $ $ 875 usuku lwami lokuqala ukudlala nxazonke ngalezi zindlela. Ungase ube ne-Pot of GOLD! NGIYABONGA!
Amazwana wekhasimende - Izinkomba - Juni 18th, 2019
Sawubona - ngithande izinhlelo zakho zokuhweba. Ngenze amadola angu-$ 1,000 kusukela kuso ngosuku lokuqala nge-akhawunti ye-simulator kumthengisi we-ninja. Ngakho ngithengile namuhla.
... Ngiyathanda ngempela ama-INDICATORS !!!
Sawubona uJerome, kufanele ngikutshele ukuthi ukuhweba usebenzisa isibonakaliso sevolumu ebushelelezayo kuyinto engavamile ...
Amazwana Komakhasimende - Izinhlelo - June 11th, 2019
Ngisanda kuqeda isinyathelo esisodwa se-Top Step 50K sihlanganisa ezinsukwini ezingu-11. 🙂 usebenzisa isu le-1003!
Amazwana wekhasimende - Izinkomba - May 31st, 2019
UJerome- Wayenosuku oluhle namuhla ekuqaleni kwami ​​ngezinkomba; isuliwe i-$ 1900 ku-e-minis. Kwakufana nokuthola izibuko zami nokuzibeka, zikwazi ukubona imakethe ngokucacile ngezindlela ezingatholakali kwenye indawo. - Ngizozungeza futhi ngifeze ukuthengwa kwami ​​ngeviki-ithemba wena unomuntu omuhle wena.
... Ngingathanda, futhi ngeke, ngingaze ngisebenze ngaphandle kwe-CycleTraderPro, njalo!
UTom - iMercersburg, PA
Amazwana wekhasimende - Izinkomba - Juni 21st
Ngesikhathi se-1 ngokusemthethweni kanye namaminithi angu-40 ngikhuphuke u-$ 1,000 ukuhweba ishadi le-1 min kuphela okuhweba kakhulu isivumelwano se-1 no-2 uma kudingeka. Vele uhwebe lokho ongibonise ... empeleni kungukukhathazeka okungenani engake ngithatha ukuhweba.
Angiqiniseki ukuthi noma ubani omunye ngaphandle ukhombisa ivolumu njengendlela inkomba ngendlela oyenzayo. Kodwa yilokho ithikithi legolide lokubona lo mkhuba! Umsebenzi omangalisayo!
Manje ngilindele ukuthatha lezo zohwebo kuze kube yilapho ngibona i-VMI Volume ihamba ngendlela efana ne-index index kanye ne-BOOM! HEWU!
I-Bader, CA - I-NQ Day Trader
Amazwana wekhasimende - Izinkomba - Juni 20th, 2019
Ngangithanda i-VMI nomugqa oluhlaza ngezinombolo zebha. Umsebenzi omkhulu uJerome. Siyabonga
Ngazithola lapho ngithola izinhlelo ze-CycleTRADER. imiphumela emangalisayo. I-Euro yenza i-$ 6335, futhi enye i-$ 3800 ... Ngiyabonga kakhulu uJerome, wenza umsebenzi womlando ekuthuthukiseni lezi zinhlelo zethu.
I-Bart D - I-System Trader eJalimane
Ngithande izinkomba emva kokuhlola okunye - ngabathenge! Yileyo ndlela engithanda ngayo ukudayisa. Kubonakala sengathi usizo oluwusizo ngempela ukusebenzisa ngesikhathi sokuhweba kwangempela. Unayo ngempela umkhiqizo omkhulu ngezinjongo zami. Ngiyaqondana ngokucacile nendawo ohlala ngayo ukuze usebenzise amathuba ezimakethe.
Jerome - I-CT 34 Ukusekela / Ukumelana ne-Windows ne-CT 09 Bar Volume Delta ayikho into engafanele.
Kuyadangalisa ukuthi ngenza okuphambene nami ngokujwayelekile uma ngifika ezindabeni ze-delta, okusho ukuthi uthengise ngokubomvu. Manje ngifika efasiteleni futhi ngibheka ukuthenga ngokubomvu futhi ngithengise lapho kuluhlaza ngenxa yokuthi yiyo indlela esebenza ngayo futhi ngiyakwazi ukuyibona manje kusukela ku-Indicator Trader Indicator.
Noma kunjalo, enye inguquko yemidlalo kimi. Ukulibulala ezinsukwini ezimbili ezedlule ngalesi shadi se-min delta ye-15 min
Amazwana wekhasimende - Izinkomba - Juni 19th, 2019
Jerome, - Amazwi akakwazi ukuchaza ukusebenza koMphathi we-Cycle. Wena uvele uthola abathengisi izikhali eziningi ezenziwe ngokwezifiso ngokuzenzakalelayo ukuze BEAT imakethe usuku nosuku ngaphandle ... Ngezibuyekezo eziningana nokuthuthukiswa okuthuthukisayo kwisofthiwe esivele ihlukile futhi esebenzayo awungayeki ukumangaza. Ungumqambi weqiniso, umhwebi wabathengisi.
Ukuzivumelanisa njalo ezimakethe eziguqukayo kuze kube phakade kodwa uhambisana nenqubo esemqoka. Ukubuyekezwa kwamuva ngevolumu entsha ye-delta bar kanye namafasitela / ama-Windows / ama-resistant eqiniso angenalo lutho engikuboné ngaphambili. Uyazi ukuthi ubheke nini ukuthengisa nokuthenga ngaphandle kokukhubazeka kokuhlaziywa. Kunzima ukuza ngokuhweba kwanamuhla. Ukuhweba okuphelele kwenjongo.
Abaningi bangazuza nge-software yakho. Ngingumthengisi omncane kakhulu (izivumelwano ze-2-3) futhi ezingavamile ukuthi angihlangabezani nelitshe lami le-1K nsuku zonke usebenzisa isofthiwe yakho. Kufana nokuba nezibuko ze-Xray futhi ungalindela ukolweni oyokwenzeka. Vele "landela izibalo" njengoba usho. Ayikwazanga ukuyiqiniso ngokwengeziwe.
URobert - Umthengisi we-Cycle Trader Day.
Imiphumela yokusebenza ngokucophelela inezinsizakalo eziningi ezikhona, ezinye zazo ezichazwe ngezansi. Akukho okwenziwayo Ukuthi noma yikuphi i-akhawunti izokwazi noma izokwazi ukuzuza inzuzo noma ilahlekelwe okufanayo kulabo abonisiwe; Eqinisweni, kukhona ukuhlukana okuvame ukwedlula phakathi kwemiphumela yokusebenza ngokulinganayo kanye nemiphumela yangempela Okutholakele nganoma yiluphi uhlelo lokuhweba oluthile.
Omunye wemikhawulo yemiphumela yokusebenza okuyiyo yonke into yukuthi ijwayele ukulungiswa ngenzuzo yokubheka emuva. Ukwengeza, ukuhweba ukuhwebelana akubandakanyi ubungozi bezezimali, futhi akukho irekhodi lokuhweba i-Hypothetical lingakwazi ukuphendula ngokugcwele umthelela Wezingozi zezezimali zokuhweba kwangempela. Isibonelo, ikhono lokumelana nokulahlekelwa noma ukunamathela ohlelweni oluthile lokuhweba Ngaphandle kokuhweba okulahlekelwa yizinto ezibonakalayo ezingathinta kakhulu imiphumela yokuhweba yangempela.
Kunezinye izici eziningi ezihlobene nezimakethe ngokujwayelekile noma ekusetshenzisweni kwanoma yiluphi uhlelo lokuhweba olucacile olungenakulinganiswa ngokugcwele emalungiselelweni okusebenza okungaqondakali nakho konke okungahle kuthinte imiphumela yokuhweba Ukudalulwa kwengozi: I-Futures ne-forex yokuhweba iqukethe kakhulu Ingozi futhi akuyona yonke imali. Umtshali-zimali angase alahlekelwe konke noma okuningi kunokutshalwa kwezimali okuqala. Umngcipheko wengozi yimali engahle ilahleke ngaphandle kokufaka engozini ukuphepha kwezezimali noma isitayela sokuphila. Imali engozini kuphela okufanele isetshenziselwe ukuhweba futhi kuphela labo abanengozi eyanele yokubambisana kufanele babheke ukuhweba. Ukusebenza kwangaphambilini akusho ukuthi kubonisa imiphumela yesikhathi esizayo. Ukudalula: ukutshala izimali ezinamasheya kanye nempahla kuhilela izingozi ezinkulu futhi akufanele kwenziwe ngaphandle kokuqonda zonke izingozi ezihlobene nokudayiswa nokuthengwa kwemali.
Isithuthuthu se-profittrader software esichazwe lapha senzelwe ukuba ithuluzi lokusiza abatshalizimali ngezinqumo zokutshala izimali. Unomthwalo wemfanelo kuphela wokuhlola nokunquma ukuthi yimaphi futhi yimaphi imigomo okufanele uhlanganyele kunoma yikuphi ukuthengiselana, nokunquma ukufaneleka kokukhetha kwakho.
Ngokutshala izimali noma izimpahla, ungalahlekelwa yimali yakho yonke imali. Ukusebenza kwangaphambilini akuqinisekisi imiphumela yesikhathi esizayo. Noma yiluphi uhlelo lokuhweba oluchazwe kule sayithi lungakwenzi neze imali futhi udinga ukuqonda ingozi ehilelekile ngenhla.
Kudingeka sitshengise lokhu - Le nkulumo isetshenziselwa ukufundisa kuphela futhi imibono evezwe yilezo kuphela umethuli. Wonke amathenda asetshenzisiwe kufanele acatshangwe njengengqondo futhi akumele alindeleke ukuba aphindwe kwi-akhawunti yokuthengisa ephilayo.
Ubufakazi obuvela kule webhusayithi ngeke bumele amanye amakhasimende noma amakhasimende futhi akuyona isiqinisekiso sokusebenza noma ukuphumelela esikhathini esizayo.